‘पशुपति प्रसाद’ मा देखाइएको पात्र ‘भष्मे’ को हो ? – Khoj Patra
खोज पत्र२४ चैत्र २०७५, आईतवार ०६:००
२०७२ माघ २१ गते सिटी सेन्टरबाट फिल्म सकेर राति अन्दाजी १० बजे निस्कँदै गर्दा पशुपति लाई‘चोर’ को बात लगाउने ती सुन पसले लाई मन मनै खुब सरापेँ । खुबै भोक लागेको थियो । वरपरका सबै पसल बन्द थिए ।
एक मित्रका साथमा चाउचाउ खानका लागि पसल खोज्दै घट्टेकुलो तिर लागियो । चार खाल चोक नपुग्दै परबाट एउटा ठेलामा मधुरो बत्ती देखियो । दुई भाइ दगुर्दै ठेला अगाडि पुग्यौं । ‘ठेले दाजुु’ मःम बसालेको स्टोभ लाई दम दिँदै थिए ।‘दाइ, चार प्लेट मःम’ मैले सास रोक्दै भने ।‘यता बस्नुस् न’ भन्दै दाजुले मुढा तेर्साए । म मुख भरि पानी निकाल्दै थुचुक्क बसेँ । साथी पनि बस्यो । ठेले दाजु झन् जोर जोरले स्टोभ ठेल्न व्यस्त भए। म आफ्नो मन सङ्ग कुरा गर्न थाले, ‘पशुपति नमरेको भए उसको पनि यस्तै ठेला हुन्थ्यो होला । त्यति राम्री प्रेमिका थिई , आमाको ठाउँमा बुढी आमा थिइन । बाउको ठाउँमा ‘मित बा’ थिए । ’
ठेले दाजुले ‘ल भाइ मःम’ भने पछि होसमा आएँ । तातोले मुख खुइल्याउदै कपाकप मिठो
मःम खाएँ । ठिक त्यसै बेला सम्झिए ‘भस्मे को हो ? के ऊ भीम बहादुर हो ? कि भस्म बहादुर हो ? कहाँ उसको घर ? के हो उसको थर ? उ कसरी त्यस्तो भयो ? अब के गर्छ उसले ? कहाँ जान्छ ऊ ? मःम का २० डल्ला सकिँदा सम्म मैले पशुपति जो मेरै जिल्लाको, मै जस्तो, भूकम्प पीडित थियो र फिलिमको हिरो थियो उसलाई विर्सिए। भस्मेको त कोही त छैन । पातलो छ । तालु छ । त्यसले त कोही केटी पनि पाउँदैन होला ! कोठा सम्म पुग्दा भस्मे भन्ने पात्र लाई लिएर खगेन्द्र दाइले पक्का अर्को चलचित्र बनाउँछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । उनले बनाएनन् भने कुनै दिन म दाजु लाई भेटेरै सोध्छु कि ‘भस्मे को हो ? र ऊ कहाँ बाट आयो ?’
पेटमा भात नपसेको र दिमाग बाट भस्मे नहटेकोले म निदाउन सकिन । म अति थोरै मात्र नेपाली फिलिम हेरेको मान्छे । भस्मे जस्तो चरित्र नदेखेको मान्छे । भस्मे नेपाली फिलिमि जगतकै आइकोनिक खल पात्र । मलाई हलिउडको अर्का आइकोनिक खल पात्र जोकरको भाइ जस्तो लग्यो । उसको पनि कोही थिएन र यसको पनि कोही थिएन । ‘The Dark knight’ हेरिसके पछि पनि म हिरो ब्याटम्यानको भन्दा गुन्डा जोकरको प्रसंशक भएको थिएँ । हो, त्यस्तै भएको थियो । त्यस दिन पनि ।
केही महिना पछि जानकारी पाएँ कि खगेन्द्र लामिछाने र दीपेन्द्र के खनालले नयाँ फिलिम बनाउँदै छन् । खुब खुसी भएँ । यो सोचेर कि त्यो फिलिमले पक्का भस्मे ‘कसरी भस्मे भयो’ भन्ने कथा बोल्छ । तर फिलिमको नाम सुनेर र ट्रेलर हेरेर म निसास भएँ । ‘पशुपति प्रसाद’ हेर्नु अगाडि मैले हेरेका नेपाली फिलिम ‘कबड्डी कबड्डी ’ र पछाडि ‘कालो पोथि’ मात्र हुन् ।
सन् २०१७ ताका हलिउडमा ‘जोकर’ नामको फिलिम बन्ने भन्ने हल्ला चल्यो । म खुब खुसी भए । त्यस बेला पनि यो कुरा चाहिँ खड्की रहयो कि ‘भस्मे’ नामको चलचित्र नेपालमा कैले बन्छ ? केही दिन अगाडी ‘जोकर ’ फिलिमको पहिलो ट्रेलर हेरेँ । हेरेको हेरेकै भएँ । साधारण हास्यव्यङ्ग्य गर्ने सर्कसको जोकर कसरी त्यस्तो भयानक गुन्डा बन्छ भन्ने कथा बोल्ने उक्त चलचित्रको पहिलो शो नै हेर्ने सोचमा छ ।
मलाई लाग्छ भस्मे त्यतिकै त्यस्तो बनेन । यसको पछाडि पनि थुप्रै कारणहरू होलान् । हलिउडले उनीहरूको सबै भन्दा मन पर्ने खलनायक लाई आज सम्म जिउँदो राखेका छन् । के हामीले त्यस्तो गर्न हुँदैन ? हाम्रै माटोको सुगन्ध बोकेको भस्मे लाई जम्मा एउटै चलचित्रमा मात्र छोडिदिने ? त्यो पनि जिउँदो । अनि उस्लाइ जिउँदै मारी दिने ? के यो म जस्ता भस्मे चरित्रको प्रशंसक माथि अन्याय भएन ?
हाम्रो जस्तो अति न्यून दर्शक पाउने चलचित्र जगतले कहिले सोच्ने ‘कि चलचित्रमा बलिया चरित्रहरूको खाँचो छ ।’ हामी चुटुक्क अनुहार परेकालाई रातारात हिरो अथवा हिरोइन बनाउँछौं । तर बलियो चरित्र चित्रण गर्न तर्फ ध्यान दिँदैनौ । अहिलेको समयमा ‘न पैसा बाधक, न प्रविधि नै ।’ यति हुँदा हुँदै पनि खालि मुस्ताङ्मा नौ रङ्गी लुगा लगाएको हिरो लाई सेता तिघ्रा देखाउने हिरोनिको पछाडि कुदाइ मात्र रहने ? होलान त्यस प्रकारका फिलिमका पनि आफ्नै दर्शक वर्ग होलान । तर म सानो हुदा ‘लाहुरे ‘, ‘देउता ‘, ‘ सिमारेखा ‘ जस्तो फिलिम हेरेको मान्छेले मेरा सन्ततिलाइ कुन फिलिम देखाउने ? यो प्रश्नको जवाफ मलाई कस्ले दिने ?
भस्मे एउटा प्रतिनिधि चरित्र मात्र हो । नेपाली चलचित्र मा थुप्रै कमि कमजोरी छन् । त्यस्तो कमजोरीहरुको भिडमा बलियो चरित्रचित्रण गर्न नसक्नु सबै भन्दा प्रमुख कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ । भस्मे जस्तो चरित्र निर्माण गर्न म जान्दिन, खगेन्द्र लामिछाने दाइ लाइ कति समय लाग्यो । दिपेन्द्र के खनाल दाइ लाइ कालो अक्षरमा सेता पानामा पोखिएको भस्मे लाइ रङिन पर्दा सम्म पुर्याउन कति कठिन भयो र बिपिन कार्किलाइ आफुलाइ भस्मेको चरित्र भित्र छिर्न कति गर्हो भयो । तर यो बुझ्दछु कि फिलिम लेख्नु तपस्या हो र बनाउनु साधना हो । भस्मे त्यस्तै तपस्या र साधनाको फल हो । त्यसैले भस्मे मलाई त्यति प्यारो छ । मलाई ऊ कसरी त्यस्तो भयो यस्को जवाफ कसले दिने ?
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०६:००
१२ असार २०७६, बिहीबार ०६:००
९ चैत्र २०७५, शनिबार ०६:००